Actorylọ ọrụ 5050-7000mAh, Ndị na - eweta - China 5050-7000mAh Ndị na - emepụta ihe
Nkwalite Li-po Battery 35R-6000 6000mAh 3.8V Battery Cell maka Bluetooth Ọkà Okwu, ysmụaka, Electronic Robot, Ekwentị mkpanaka, POS, Express Smart Mini Printer
Batrị PLM-35R-6000 3.8V 6000mAh na-agbanye ọkụ na-eji ihe kachasị mma nwere ikike dị elu maka ndị ahịa ọkọlọtọ. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Akwa arụmọrụ Li-po Batrị XRF001 6200mAh 7.2V Cell Batrị maka Laptọọpụ, X-ray
Batrị PLM-XRF001 7.2V 6200mAh nke enwere ike ịgbagha ike na-eji ihe kachasị mma na ike dị elu enwere ike maka ndị na-eri nri. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Gas Leak Dlector Single Gas Leak Alarm Batrị ERT-06 3.7V 6000mAh Polymer Lithium Batrị maka Ihe Nchọpụta Gas
Batrị PLM-ERT-06 3.7V 6000mAh nke enwere ike ịgbagha ike na-eji ihe kachasị mma na ikike kachasị elu enwere ike maka ndị na-azụ ahịa. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Gas Leak Dlector Single Gas Leak Alarm Batrị 103450-3P 3.8V 6000mAh Polymer Lithium Batrị maka Ihe Nchọpụta Gas
Batrị PLM-103450-3P 3.8V 6000mAh na-agbanye ọkụ na-eji ihe kachasị mma nwere ikike kachasị elu maka ndị ahịa ọkọlọtọ. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.